Imibono Engu-27 Engcono Kakhulu Yohambo Lwamantombazane Emhlabeni Wonke Ohambweni Lakho Lwamantombazane Olulandelayo
By UChrisking September 20, 2021 Izikhangibavakashi 0 Amazwana
- Imibono Yokuhamba Kwentombazane -
Yini engqondweni lapho ucabanga ngabesifazane ngezimpelasonto? Ukuthenga, ilanga, i-spa, isivini? Vele nami. Kunjalo. Lezi izinto ezijabulisayo nabangane njalo.
Kodwa-ke, akudingeki ukuthi uye ezindaweni ezidumile kodwa ezibizayo njengeCharleston, iNashville, iNapa, iSanta Fe, iLas Vegas, noma i-Key West ohambweni lwakho olulandelayo. Isikhathi sokucabanga ngaphandle kwebhokisi kancane.
Ukuhlunga lapho ungaya khona ukuvakasha kwabesifazane abancane kungathakazelisa. Ikakhulukazi esimweni lapho udinga ukwengamela izitayela ezihlukile zokusuka, izinhlamvu, kanye nezikhathi. Futhi lokhu kungenxa yokuthi kungani si-oda ukucekelwa phansi kweziphikiso ezinhle kakhulu zokuphunyuka kwamantombazane akho alandelayo.
Ingxenye yamabala iyamangalisa ukuphela kwezinsuku ezimbili noma ezintathu zeviki (cabanga ngoNashville no-Austin). Kodwa-ke, enye inzuzo ngokuhlala isikhathi eside, njengePortugal noma iPuerto Rico.
Ezinye zilungele izintokazi ezisencane ezidinga ukuya e-US (siphakamisa ukuphuma emgwaqweni usuka eMiami uye eKey West), kanti ezinye zilungele abantu abafisa ukuya kwelinye izwe, elifana neDublin neBarcelona).
Ngaphezu kwalokho, ukuphikisa okumbalwa kunikeza izixuku zenkululeko ukuzijabulisa elangeni (njengokuhlala okuphelele eJamaica), kanti ezinye — njengeNewport, iRhode Island, noma iPalm Springs — zinikela ngokukhishwa kobuthi emzimbeni okucacile.
Futhi ukuthi sifake nezintombi ezimbalwa ukukhipha imicabango engasebenza njengomama ohloniphekile wentombazane ekupheleni kwesonto ukubaleka, njengoSonoma noma uSavannah.
Izindawo ezingama-27 ezihamba phambili zemibono yohambo lwentombazane yakho elandelayo
I-1 I-Palm Beach, eFlorida
Ukufika okulula enhlosweni eyakhiwe ekhaya eqinisekisa ukukhanya kwansuku zonke okungapheli, ibanga le-pastel shading, nolwandle olunamabala esundu, ikhanda ku IPalm Seashore, eFlorida.
Ndiza esikhumulweni sezindiza iPalm Seashore Worldwide Air, futhi ngokushesha, uzowela isikafula uye kwesinye sezifunda zeposi ezicebile kakhulu kodwa ezizalwa kakhulu eMelika - idolobha elithandekayo ngokuthola okuhlangenwe nakho nangamaparele ayimfihlo, ngaphesheya kwe-Intracoastal Stream, I-West Palm Seashore inikeza ukuzwa okuningi kwamaphakathi.
Hlala eHilton West Palm Seashore, lapho amaphathi oMgqibelo wamachibi, i-yoga, ibhulakufesi elingakahleleki, nokuphela kwesifunda seFit Fit okwenza isithandwa esingcono kakhulu ukubaleka, noma iThe Ben, indawo esanda kuvulwa iMarriott Signature Assortment inn efakwe umphefumulo oholayo iFlorida yakudala.
ISpruzzo esophahleni luyinto ephambili phakathi kwabantu bendawo nezivakashi ngokufanayo.
Udinga ukukhulisa izigxobo ngokuphawulekayo? USepthemba uletha iFlavour Palm Seashore, inyanga yekhefi yamaPalm Seashores, kanti u-Okthoba yiNyanga ye-Spa ne-Wellbeing, ngakho-ke hlela ukuphuma okusakazeka ezinyangeni ezimbili kokuphela kwesonto okude.
2. ISavannah, eGeorgia
Lokhu ubuhle basogwini lwaseNingizimu (imigwaqo eyigobolondo yamatshe! Ubulembu baseSpain!) ilungele noma iliphi iholide lentombazane eligxile ekuphumuleni.
Hlala ePerry Lane Hotel, ehlinzeka ngobuhle besimanje ngezindawo eziningi ezifanele i-Instagram, kufaka phakathi ichibi elisophahleni oluphezulu nebha (ungavakashela iPeregrin ukuthola ama-cocktails amahle nokubukwa kwedolobha noma ungahlali lapho).
Thatha ingilazi yokuncoma ye-champagne namabhayisikili amaningi ehhotela ekuseni bese uya eChippewa Square engomakhelwane, indawo yezigcawu zebhentshi ezidumile zeForrest Gump.
3. ENashville, eTennesse
Kuwo wonke amuva kakhulu impela isikhathi eside, Nashville sekuphenduke indawo yokuthi kube yimicimbi yabesifazane abangashadile.
Futhi, abantu ngabanye bayayikhetha yonke into ebhekwayo - idolobha likhaya lezindawo zokudlela ezinhle, imigoqo, futhi mhlawumbe nezinqumo ezinhle kakhulu zokuzijabulisa ezweni.
Kude nakude kude, kuhambisana nezindleko ezinesizotha, njengokuzitika edilini lenkukhu elishisayo elingenakuphuthelwa. Thola inqwaba enesizotha yenkukhu ebabayo ngo- $ 13 kuphela ngaphambi kokushaya.
4. Santa Fe, eNew Mexico
Kwenze isiphetho se-spa sesonto e-Ojo Santa Fe, ingxenye ebabazekayo, engaba ngu-70 yomhlaba yokubona izinto ngamehlo ingene ehlane lase ISanta Fe, eNew Mexico.
Ukuzivocavoca okuvuselelayo, yazisa ukuzivocavoca okugxile enhlalakahleni, phumula emabhavini adonsa umoya ovulekile, futhi udle ukudla kwamapulazi okusha ngesikhathi sokuhlala kwakho okuphelele.
Isigaxa se-Young ladies Escape sikhumbula izakhiwo ze-casita yesitayela se-adobe, amadina, isikweletu se-spa, nokuzivocavoca kwansuku zonke (cabanga: i-yoga, ukucabanga, ezolimo, amakilasi okupheka nawokusebenza, ngisho nesikhathi sokudlala).
Uma ucabanga ukuthi udinga ukutolikwa kwedolobha elikhulu ngeSt Nick Fe, hlala eLa Posada de St Nick Fe, eRecognition Portfolio Resort naseSpa, okuyindawo ekhohlisayo ehamba ibanga ukuya eSt Nick Fe School of Cooking, lapho ungathola khona ukuthi ukwenza izinhlobo ezivamile zokudla kwaseNingizimu Ntshonalanga.
5. ISonoma, eCalifornia
Ithi sawubona ku I-Sonoma uma wena nabesifazane bakho ningakwazi ukuthola iChardonnay eyanele. I-Sonoma, etholakala ezweni lewayini laseCalifornia, likhaya lamawayini angaphezu kuka-425.
Hlala eLedson Hotel, lapho lonke igumbi linomatilasi abalingana nenkosi, amabhavu e-jacuzzi, indawo yokubasa umlilo nebhalkhoni lapho ungabelana khona ngebhodlela lewayini futhi ulikhumbule.
Iziphethu Ezishisayo Eduze Kwami
Ama-CVS Eduze Kwami
I-AutoZone Eduze Kwami
Izincwadi Eziseduze Kwami
6. IMiami, eFlorida
Shaya iSouth Seashore emini, uchithe isikhathi sephathi endaweni yezandla yaseWynwood nezokuphambukisa, bese ngemuva kwalokho udansa ubusuku kwenye yamaqembu okudansa kaMiami angakholeki. (I-BTW, i-LIV iyamangaza ukubona ama-celebs.)
Hlala ngasogwini lolwandle e Ukukhishwa KweMiami Seashore, olubukisa olwandle lwalo oluyimfihlo njengolwandle olubhekene namachibi angaphandle.
Shwiba ngendawo yayo yokwamukela izivakashi yokudla, iMakethe, ukuze uzithobe ngaphambi kokuba uye endaweni eyakhiwe yezihambi yesiphepho, lapho kukhona ikilabhu nomhubhe wokubhowula.
7. EParis, eFrance
Vakashela amabhange aseSeine ukubona ubuciko, imfashini, futhi-ke, okunye kokudla newayini elikhulukazi emhlabeni. Vakashela i- Louvre noma iMusée d'Orsay ukubona imisebenzi yobuciko edumile.
Uhambo losuku oluya eVersailles noma eNormandy luzokunikeza izifundo zomlando ezinhle kakhulu (sincoma inkampani yezokuvakasha, iCity Wonders).
Hlala enhliziyweni yedolobha ngokuqasha indawo yokuhlala e-Room Mate Alain, okungezwe okusha sha ku-European boutique brand brand Room Room Mate.
Ibibeke indawo yayo yokuqala eFrance endlini yedolobha laseParis eduze kwase-Arc de Triomphe kanye ne-Avenue des Champs-Élysées edume umhlaba wonke. Ngaphezu kwalokho, ibha yayo yokwamukela izivakashi enhle izokwenza okwasemuva okuhle kakhulu kunoma yisiphi isithombe seqembu.
8. IReykjavik, i-Iceland
Ilanga alikaze lishone enhlokodolobha yesizwe. Cha, ngomqondo ofanele, kuyo yonke intwasahlobo, ilanga lize lishona, okusho ukuthi ungazungeza idolobha ubusuku bonke obungenandaba.
Hlala enkabeni yedolobha ku Reykjavik's ukuhudula okuyisisekelo, iLaugavegur, e-Alda Lodging Reykjavik. Yidla izinkanyezi noma u-Aurora Borealis kusuka kubhavu oshisayo ovulekile, noma ucindezele ukulandela usuku oluyisidina ku-sauna ethule yasendlini.
Ngemuva kwalokho, ngaleso sikhathi, uma kungenzeka uzizwe unesibindi, hlela uhambo lokuya echibini eligujwa iBlue Tidal ukuthola ama-Insta shots afanelekile.
9. Umgwaqo onguthelawayeka wasePacific Coast
Lokhu kungenye yemibono yohambo lwentombazane oluhamba phambili emhlabeni wonke ohambweni lwakho lwamantombazane olulandelayo.
Esimweni lapho uke wacabanga nganoma yisiphi isikhathi lapho ushayela IPacific enkulu yaseCalifornia ICoast Interstate, cabanga ukukwenza nabesifazane bakho abancane.
Lolu hambo luhambisana nemibono esabekayo, ama-bistros asemgwaqeni abukekayo, nokuheha okuyingqayizivele okufanele kudonselwe phansi (ukubala iSuper Blossom, uma usithathe isikhathi).
Ungashayela iWest Coast yonke usuka eSan Diego uye eSeattle (noma kunjalo ngamahora angaphezu kwama-20 wokushayela, ungadinga ukuphela kwesonto), noma umane ukhethe ukwelulwa okuncomekayo kwe-Instagram, njengeLos Angeles kuya eSan Francisco, izikhathi cishe emahoreni ayisithupha.
Udinga ukugwema inkinga yokucisha abashayeli, ukuvalelwa emotweni, nokumisa izindawo zokuphumula nokulunywa? Thatha uhambo ngesitimela e-Amtrak's Coast Starlight course.
Ungabhuka izihlalo noma izimoto zokulala nomhlaba emadolobheni afana neSt Nick Barbara, iSan Luis Obispo neMonterey osendleleni. Inyoka yomzila ohlangothini lwamawa kanye nesiphakamiso ibona ngokufana nenhle kakhulu njengoba indlela yomgwaqo isondela, kunciphisa ukwehla kokushayela.
10.Wilmington, eNyakatho Carolina
Uma kwenzeka ufuna ukujabulisa, ulwandle Ukuphunyuka kukaCarolina, uWilmington ibukisa idolobha elikhulu, elihambekayo elinamadili amaningi ngaphambili, ubunjiniyela obushaqisayo, nemigoqo nezindawo zokudlela ezinobungane.
Zama ukungaphuthelwa amabhola eRisotto eQuanto Basta, amandla asolwandle eSeabird, noma izingoma ezibukhoma nama-tac eSatellite Bar. Kukhona nolwandle oluningi ngokufanayo kuze kube kusihlwa.
Ama-Aficionados ezinhlelo zeSudsy Network ezinjengeDawson's River, One Tree Slope, neHart of Dixie zizokuthokozela kakhulu ukubona izindawo zokuqopha ubuso nobuso, kepha awudingi ukuthi ubuke noma yiluphi lolo chungechunge ukubona ukubaluleka kokuheha kwedolobha.
Hlala ngasosebeni lomfula iConsulate Suites ukuze ungene kalula kwiJoyous ngale kwamagama ophahleni lwendlu lapho kuqondwa khona izimpophoma ezipinki ngazo zonke izinhloso. Kungokufanayo eduze kwenkundla yemidlalo esanda kuvulwa uma kungenzeka uthathe umbukiso.
Noma-ke futhi, zama ama-Visionaries Ukwamukelwa ukuze uzizwe we-shoppy ngaphezulu.
11. UCharleston, eSouth Carolina
Uthole umuzwa weholide omangalisayo owenzelwe amantombazane akho ngqo. Ngesithombe sakho se-IG glam, hamba uzungeze imakethe yezintambo ethandekayo nasemthonjeni odumile wamaphayinaphu, ”uphakamisa.
"Bese uhambahambahamba uzungeza ipaki elingasemanzini noma uyothenga kuKing Street." Futhi-ke, jabulela konke ukudla kwaseNingizimu ezikhungweni ezaziwayo ezifana neHusk neLewis Barbecue.
U-Andrews uncoma ukuthi kubhukwe eMarket Pavilion Hotel maphakathi nedolobha Charleston. "Isenkabeni yedolobha futhi inikela ngezingubo zokulala ezilungele wena nethimba lakho."
12. EMexico City, eMexico
Mexico City inokuthile cishe kwawo wonke umuntu embuthanweni wakho. Vakashela izimakethe ezethusayo ngaphandle kokudla, ikhaya nesitudiyo sikaFrida Kahlo, iziteshi zeXochimilco zokugibela isikebhe esijabulisayo, noma amaphiramidi amadala aseTeotihuacán, okuyindlela emfushane yokuhamba ngezimoto.
Jabulela ama-tacos nama-tamales kukho konke ukuhlangana kwezimoto, nakuma-diners e-fancier, gcina indawo eContramar noma ePujol. Hlala enkabeni yenye yezindawo ezinedolobha elihle kakhulu, iLa Condesa, eMaria Condesa.
Bhuka i-spa suite ye-sauna yakho esekamelweni, noma uwele idolobha ngesitayela ngokuqasha amabhayisikili kwamahhala indawo yokuhlala oyinikezayo.
Wonke umuntu uyazi ukuthi iNew Orleans yindawo okufanele uye kuyo ukuzwa umculo omangalisayo, udle, uphuze. Hlala e-The Ace Hotel uma ngabe yilokho okufunayo.
Ngumdlalo opholile kunawo wonke edolobheni, oneshashalazi lawo lekhonsathi, izindawo zokudlela, nebha yophahla edume kakhulu nedamu, futhi kuhle iqembu labangane elifuna ukuzijabulisa kwi-Big Easy.
14. I-Airbnb Ikhaya Losaziwayo
Akukho okufana netimu enhle yokuletha uhambo lwangempelasonto lwamantombazane ezingeni elilandelayo. Ungaqasha izindlu zosaziwayo ngokusebenzisa I-Airbnb, njengeGolden Girl Guest House, etholakala ngaphesheya kwekhaya lobuntwana likaRue McClanahan.
Ezinye izindawo zokulala ezingajwayelekile zifaka phakathi uChad Smith wasendaweni yaseMexico iRed Hot Chili Peppers naseSonny and Cher's househouse cottage eHollywood Hills. Akukho okufana netimu enhle yokuphilisa uhambo lwabesifazane lwangempelasonto.
15. ENewport, eRhode Island
Awukwazi ukuya eNewport ngaphandle kokuthola ukudla kwasendaweni Umkhukhu waseNewport Lobster. Ngemuva kwesidlo sasemini etafuleni elingaphandle elingasemanzini, suka kulawo ma-lobster ngokuhamba ngokukhululeka uzungeze i-Precipice Walk eyaziwayo.
Umzila ungamamayela ama-3.5 wolwandle olujabulisayo. Bese, ngaleso sikhathi, cwaninga ngezindlu eziphawuleka ngenkathi nicabanga ukuthi nonke nihlala lapho ndawonye.
16. ELondon, eNgilandi
London, enezindawo zokudlela eziningi, izitolo, nemipheme, ilungele abantu abathembele kuphenyo ngokungaphumuli, futhi okuyingxenye enhle kakhulu ukuthi ungaba nesembozo esincane umthwalo omningi womhlaba ekugcineni okukodwa kweviki.
Bhuka igumbi endaweni yokuhlala i-The Ned enkabeni yedolobha, lapho nabantu bendawo bethanda ukulenga kwenye yezindawo eziyisishiyagalolunye nezindawo zokudlela ezinhle (elinye lisendaweni yokugcina yasebhange yangaphambilini, i-NBD) noma elinye lamachibi amabili.
Ngaphandle kokuthi asikho isizathu esithokozisayo sokuthi nganoma yisiphi isikhathi ushiye isakhiwo, idolobha lisemnyango wakho, okwenza kube lula ukwenza konke.
Izinto okufanele uzenze eNashville
Izinto okufanele uzenze eCalifornia
Amakati aseBengal Ayathengiswa
17. I-Key West, eFlorida
Thatha uhambo lokushona kwelanga lwe-champagne ubone Amabhishi asemqoka aseNtshonalanga. Kukhona futhi indawo yokuthwebula i-snorking kulezi ziqhingi.
Ingabe abangane bakho bayajabula? Uzozwa idolobha ngokukhanya okusha ohambweni oluhle noma olusabekayo lokukhasa lwe-pub. Hlala eSunset Key Cottages bese uvuka ube ne-panorama enhle yasolwandle.
18. Papagayo, Costa Rica
Useholidini, ngakho-ke kungani ungazitholi usendle? ECosta Rica, ungalayini we-zip, ucwebe i-surf, bese ulenga nezinkawu ehlane.
Ngasekupheleni kosuku, buyela emuva ku- Andaz Papagayo, esiseduze ne-terminal yomoya futhi inokudla okumangazayo ngaphezu kwe-spa ehlukile. Buhle, futhi ungathatha i-dunk kuCulebra Sound lapho udinga ukwehla kusuka ku-adrenaline high yakho.
19. Iziqhingi zaseCayman
Uma wena nezintombi zakho nifuna i-adventure, iya ku- Cayman Islands. IGrand Cayman wuhambo olusheshayo olusuka eMiami, lapho ungachitha khona ukubhukuda nge-scuba ngempelasonto, i-kitesurfing, ukuhamba ngomkhumbi nokubhukuda ngama-stingray.
Hlala eKimpton Seafire Resort + Spa eGrand Cayman noma eSouthern Cross Club eLittle Cayman ukuthola indawo eshisayo ngesikhathi samantombazane.
20. IBhendi, Oregon
Ingabe uyakujabulela ubuhle obumangalisayo? Uyakujabulela ukusebenza nokuchitha isikhathi ngaphandle? Uyakujabulela ukubuyela ekhaya ekudleni okuhle kanye nenqwaba yama-spa ekupheleni kosuku olunzima?
I-bend, i-Oregon, iyindawo ekahle kuwe. I-Bend ingumcebo ocashile ePacific Northwest olungele abathandi bangaphandle.
Hlala kumaSpringhill Suites amasha, aseduze kokuhamba ngezinyawo kwedolobha i-Old Mill District, eligcwele izitolo nezindawo zokudlela ezinhle, nokuhamba ngokushesha (ngebhayisikili noma ngemoto) uye ezindleleni.
21. ISavannah, eGeorgia
ISavannah, eGeorgia, inhloso ethandwa kakhulu ngokudla kwayo, umlando, futhi ngokusobala, isikhalazo esisezingeni eliphakeme laseNingizimu.
Ukuphela kokuvulwa kwesikhathi kwePerry Path Lodging kugcwalisa njengokugcina okuhle kwepulatifomu yesonto njengoba kuhamba noma kuhamba ibanga lezici ezinjengeRiverwalk, iLegold's Frozen yogurt, iForsyth Park, indawo entsha eplastikhi iPlant Riverside Area, futhi lokho kuphela ichopho leqhwa.
Ngaphandle kwalokho, indlu yezihambi inikeza amabhayisikili amahhala kubavakashi. Ngokusobala, awukwazi ukuya eSavannah ngaphandle kokudla e-The Olde Pink House, kepha iThe Dark, indawo yokudlela kanye nebha esitobhini sebhasi esibuye senziwe eGreyhound, kungenye indlela ongakhetha ngayo.
Shayela ngaseWormsloe Notable Site ngengxenye ethile yomlando, uphuze endaweni engaphansi komhlaba iStray Feline Parlour ngemuva kokuphenya ihholo laseMelika le-Preclusion Exhibition, futhi ukhumbule ukuqeda usuku lwakho ngokuvakashela imiphakathi ngemigwaqo yaseSavannah.
Nevada Kuminyene nezifundo zokuvakasha eWild West, noma kunjalo, i-Free-roaming Craftsmanship Interstate esuka eReno iye eLas Vegas idinga amahora angaba yisikhombisa kuphela ukuphuma.
Ngakho-ke akunzima ukukuzuza ekupheleni kwesonto, futhi uzodlula ukusebenza okungahambi kahle komgwaqo, izingwadule ezivuleke ngokuphelele, kanye nezinsalela ze-Dash ezingaqhamuki zokuqhuma kwamadolobha asendleleni.
Hamba ubusuku eMospah Lodging eTonopah, bese uzama ukufaka izindawo ezinjengeS'Socorro's Burger Cabin, iWorldwide Vehicle Backwoods ye-Last Church, iGlad Burro (yesitshulu sebhontshisi esibalulekile), iRhyolite, neGoldwell Ngaphandle Isikhungo somlando ekupheleni kohlelo lwakho lokuvakasha lwesonto.
Qasha i-Tesla noma enye imoto kagesi: Lesi sifundo ukukhishwa kokuqala kweNevada's Electric Parkway futhi ineziteshi zokushaja ezibekwe ezindaweni ezibalulekile esifundweni.
23. I-Alexandria, eVirginia
Izikhathi ezimbalwa kuphela ngaphandle kweWashington, DC ezihlala komunye wemiphakathi yasemadolobheni ekhohlisa kakhulu eMelika: I-Alexandria, eVirginia.
I-Alexandria inomlando wokulandela yonke indlela emuva ku-1749 futhi iyindawo yakudala kamongameli wokuqala wase-US uGeorge Washington.
Namuhla, kuyikhaya lezindawo zokudlela zamahhala nezitolo ezingama-200 (funda: ukuthenga okumangazayo nokudla) futhi kunikeza ukungena ngokushesha ezinzuzweni ezinkulu zedolobha elingumakhelwane DC ngenkathi ugcina umphakathi ohamba kancane, ongahloniphi.
Hlala eLodging Indigo Old Town Alexandria, utholakale nje ngaphandle kokudonswa komthetho weRuler Road, bese ugxuma usuka futhi uye eLord Road Streetcar yamahhala ukuphenya indawo ebaluleke ngokomlando.
Abesifazane bakho abancane bazothanda ukuthwebula izithombe ngaphambi kweRentent House ne-Skipper's Line, ukuthola iziphuzo ezixubekile eMithini Yomuntu ngamunye kanye noChief Gregory's (isikhulumi esingene esitolo samadonathi), futhi behamba phambili ngaselwandle benombono kwiDC phesheya komfula iPotomac.
24. Los Cabos, eMexico
Noma ngabe ufuna indawo yephathi enesithukuthezi, ukubuyela emuva kwe-bohemian, i-detox enamandla, noma isipiliyoni sokungcebeleka, Cabo inikeza okuthile kuwo wonke umuntu. I-El Ganzo yindawo enhle yokuhlala.
Kuyihhotela lezitolo elihle kakhulu eligxile kwezobuciko nasemculweni, futhi banochungechunge lwabo lwamakhonsathi ophahleni. Baneklabhu yabo yasolwandle, okuwukuhamba nje ngesikebhe imizuzu emithathu ngaphesheya komfula.
25. ILisbon, ePortugal
Lisbon ngokushesha iba enye yezindawo ezibaluleke kakhulu emadolobheni amakhulu aseYurophu, futhi ngesizathu esihle. “ILisbon inomlando ojulile ohlangene nesimo sendawo esivusa amadlingozi ngempela.
Akuyona into ecwebezelayo njengamanye amadolobha aseYurophu, kepha inentelezi engiyithandayo.
Ukungangezi, kwenza amanani entengo athile impela. Chitha izinsuku ezimbalwa uhambahamba emigwaqeni yamatshe amatshe, ubabaza izindlu zasolwandle ezinombala we-pastel, futhi ufune ukudla kwasolwandle nezibuko ze-vino Verde.
Yenza iHotel Valverde isizinda sakho sokuhlola, nokuhlobisa kwayo okumibalabala nendawo ehlelekile (iBotanical Garden ingaphesheya komgwaqo ngokoqobo).
26. IKillington, iVermont
IVermont inamahlamvu amahle ekwindla, intaba enhle ehlobo, futhi-ke, okunye ukushushuluza okungcono kakhulu oGwini lwaseMpumalanga lapho amazinga okushisa ehla.
Killington kungaba okuhle kunabo bonke, ngamathambeka asezingeni lomhlaba, kepha kukhona namabhayisikili e-ski, i-tubing, kanye nokugibela kwesleigh okudonswe yi-Snowcat okungahlobene kangako.
Lungisa izitho zakho ezikhathele ngobusuku e-Twin Farms, indawo yokulala engahlelekile ene-cuisine eshintsha ngezikhathi ezithile, uma ufuna izindleko ezibalulekile (kodwa ezifanelekile). Ngaphandle kwalokho, hlala kwenye yama-B & B amaningi angomakhelwane.
27. Chiang Mai, Thailand
I-Wat ibhekisa ohlotsheni lwethempeli lamaBuddha oluvamile kule ngxenye yomhlaba, futhi kuningi okuzobonwa eChiang Mai. Qala ku-Wat Phra That Doi Suthep (umbono: i-akhawunti yakho ye-Instagram izokubonga).
Bese uzijabulisa ngokudla okuningi kwe-Thai ngangokunokwenzeka, ikakhulukazi okhethekile okhethekile wesifunda i-khao soi. Bhuka ubusuku obumbalwa e-BED Phrasingh ukuthola umbhede ophakathi kwakho konke.
Akukho okuhlula amaholide ngempelasonto namantombazane, noma ngabe uhamba nomama wakho, udadewenu, noma iqembu labangani. Lezi zindawo ezingama-27 emhlabeni wonke zilungele ukuphunyuka ngempelasonto okugcwele injabulo, ama-vistas amahle, nesikhathi esihle se-lady.
Ayikho indlela engcono yokusebenzisa isikhathi sekhwalithi namantombazane akho kunohambo ndawonye, ​​noma kungukubaleka ngempelasonto noma iholide eligcwele elangeni.
Uhambo nezintombi zakho ezihamba phambili kungaba ithuba elihle lokuvuselela, uphinde uxhume, futhi ujabule, ngaphandle kweziphazamiso noma izibopho.
Ngoba inhloso yeholide lentombi ukuchitha isikhathi ndawonye, ​​kunezindawo eziningi ezijabulisayo ongaya kuzo ezingadingi ukubiza ingalo nomlenze.
Le yimibono yokuhamba ezokuvumela ukuthi uzame okuthile okusha, ufunde okuthile okusha, noma ube nokuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kokuhlangana ezindaweni okungenzeka ukuthi awubonanga ukuthi kuzoba kuhle ohambweni lwentombazane.
Sicela ushiye amazwana, njengale ndatshana kuma-Girl's Trip Ideas, bese utshela abangane bakho nomndeni wakho ngakho!
Tags:Ama-50 best getaways wezintombi, konke okubandakanya izintombi ezibalekayo 2020, uhambo oluhle kakhulu lwentombazane lokuzalwa lwama-40, ukuhamba okuhle kwamantombazane okubandakanya konke, amadolobha amahle kakhulu ohambo lwamantombazane, izindawo ezihamba phambili zokuhamba amantombazane e-europe, amaphakheji okuphunyuka kwentombi 2020, amaphakheji okuphunyuka kwentombi 2021
Ungazenza Kanjani Nezindawo Zokufaka Imali Ama-oda Wemali Eduze Kwami ngo-2021
I-Florida State Parks Nendlela Yokonga Imali Ekuvakasheni Kwakho
Izinto Okufanele Uzenze eNtshonalanga Virginia Ukujabulela Ukuphumula Kwephupho Lakho
Ama-albhamu aphezulu we-Rap wesikhathi sonke nama-albhamu aphezulu we-Kanye West ayi-13
Ukugeza Ubuso Okungcono Kakhulu Kwamadoda Anezimfanelo Nemisebenzi Emangalisayo
Izindawo zokudlela eziphuma phambili zokokudla e-Rome, i-Pizza nokunye ukudla kwe-Vegan
Izihlahla Ezipholile Emhlabeni Wonke Nezici Zazo Ezihehayo
Imitapo Yezincwadi Emihle Emhlabeni Wonke nokuthi Ungayitholaphi
I-SunTrust Blog I-Copyright © 2021.
Theme by MyThemeShop.	Buyela Phezulu ↑